Umzimba wamaShayina wokuvikela ukungathembeki uphenya ukuthengwa kwe-Uber China nguDidi Chuxing, umlingani we-Apple | Ngivela kwa-mac
Umzimba wamaShayina wokungathembeki uphenya ukuthengwa kwe-Uber China ngumlingani we-Apple uDidi Chuxing
Kubukeka sengathi imakethe elandelayo inkampani esekwe eCupertino ifuna ukufaka ikhanda layo ku-automation. Futhi njengobufakazi balokhu sinephrojekthi yeTitan lapho i-Apple izokwakha khona imoto kagesi okuthi ngokwamahemuhemu wakamuva izofika ngonyaka ophelile, ngo-2021. I-Apple ibuye itshale imali ezinkampanini ezihlobene ne-automation., njengoba kwenzeka kuDidi Chuxing, i-Uber yaseChina, esanda kuthenga isigaba se-Uber endaweni yase-Asia, ishiya bonke abasebenzisi be-Uber nabashayeli babo ngaphansi kwesibopho sokuqala ukusebenzisa insiza ye-Didi Chuxing.
Njengoba kubikwe yiWall Street Journal, eUhulumeni waseChina usanda kuvula uphenyo ngokuthengwa kwe-Uber China yimbangi yakhe enkulu uDidi Chuxing emasontweni ambalwa edlule. Kumele kukhunjulwe ukuthi ngoMeyi odlule, u-Apple wavakashela kuleliya lizwe ukuyoqinisekisa ukungena kuka-Didi Chuxing wamadola ayizigidi eziyi-1.000, waba yingxenye yabaninimasheya, ngakho-ke lolu phenyo luthinta ne-Apple.
UNgqongqoshe wezohwebo waseChina wathi eminyakeni embalwa eyedlule uvule uphenyo lokuphenya ukuthi ukutholwa kwe-Uber China yimbangi yayo enkulu uDidi Chuxing Technology Co kuyakuthinta yini ukuhwebelana ngokukhululeka, ngemuva kokuthola izikhalazo ezahlukahlukene ezithi kungukuthi Kuphula ukuncintisana kwamahhala Izwe, bonke abasebenzisi kufanele badlule kwindandatho efanayo.
Uhulumeni waseChina ucele imibhalo mayelana nokuthenga kanye incazelo yokuthi kungani uDidi Cuxing engazange acele ukwenganyelwa yikhomishini yama-antitrust yezwe ngaphambi kokuqhubeka nokuthenga. Ekuzivikeleni kwakhe, uDidi uqinisekisa ukuthi imali etholwe ngu-Uber ezweni ibingaphakeme kangako ukuthi ingabanjwa yile mfuneko.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Umzimba wamaShayina wokungathembeki uphenya ukuthengwa kwe-Uber China ngumlingani we-Apple uDidi Chuxing
Inkinga enkulu ye-Galaxy Note 7 izokwenza ukuthi i-iPhone 7 ingene ngomnyango wangaphambili
I-PDF Reader ++ mahhala isikhathi esilinganiselwe